Cimri dheer in transposh, xitaa haddii aan ka caban, I still use it 🙂
Ma aanan u cusbooneysiin weli version ugu dambeeyay sidaa darteed waxaan hubin doonaa
Ma waxa ay haatan u cusboonaysiiyaan, maxaa yeelay, anigu ma aqaan shaqo kasta oo cusub oo ha la ila barbardhigo jirka version. Oo waxaad ku dari karo, kaas oo ka dhigi kartaa bogga kasta bogga .html dhabta ah, taas samayn kartaa si degdeg ah WordPress..
U mahadsan tahay wax badan..
Casriyaynta guud ahaan waa wax fiican,, saabsan waxa ay si degdeg ah samaynta, laga yaabee inaad la isticmaalayo plugin khasnado (sida wpsupercache) in ay u badan tahay gaari doonaan horumar aad raadinayso.
Waxaan u isticmaali plugin this muddo dheer. Laakiin hosting ii sheegay naga processor dollar site, plugin tani waxay sababi kartaa dhibaatooyinka this?
Thanks mar kale..
Plugin Tani ma baabbi'iyee markii processor, kaas oo noqon kara si weyn hoos u marka la isticmaalayo ah oo ay taageerayaan ku xasuusta xal caching, sida memcached ama APC
waxaad weydiin kartaa bixiyahaaga marti ku saabsan kuwa
April 7, 2012 at 5:26 at the
Hello, Waxaan ogaaday, in ka dib markii isbedel ah ee afka ka beddesho xaaladda user ee ka diiwaan gashan on martida.
Sidee baan xallin karo dhibaatadan?
Waan hubaa Waxaan fahamsanahay ma ihi waxa arrinta aad warbixinta, isku day si ay u bixiyaan faahfaahin dheeraad ah sidaa darteed waxaan ku noqon doontaa in ay ku caawiyaan.
В WP 3.4 + By Transposh 0.8.2 Tani maaha wax dhibaato ah, Sababta ay suurto gal ahayd WP.
Plugin Great, waa qabow.
Laakiin while ee turjumidda waa wax aan caadi ahayn, waa hab u dhigay qaybo lagu xukumay in ay meel kale markii sixiddiisa?
Weli ka shaqeyneynaa in, Si kastaba ha ahaatee waxaa jira geysid yar in la beddeli karo sare ee file parser.php ah, inkasta oo ay tani ayaa laga yaabaa aan la taageeray mustaqbalka, iyo u badan tahay hayska burrinina doonaa turjumaadaha aad hadda.
Asalamu caleykum ! Just corrected the French version of your post 😉 Making your website participative is a great idea, sida plugin yahay!
Mahad badan oo waayo, shuqulkiinna waa weyn noo caawiyay furitaanka xuduudaheena luqada, oo faraxsan Dhalashada in Transposh!
Oh jidka ku ag, dhexeeya English iyo French booska uu ka magac ee vs. sifooyin la demin, iyo sida trasposh ee jarida weedho arrin aan kala sooc lahayn, waxa ay taasi ku xukuntay qaar ka dhawaajiyaan haydh qaabka ma reordering erayada si sax ah… Ma suroobi karaa waddo si ay u isticmaalaan ponctuation ah si ay u dhinto weedho burburi halkii iyaga jarida arrin aan kala sooc lahayn?
May 3, 2012 at 9:58 at the
Waad ku mahadsan tahay qamaar version Faransiiska, aadka u mahadnaqayo. Daryeel si isku mid u ah plugin laftiisa sameeyo?
Marka laga jaro random, ma aha in random, jari doonaa hay'adaha html, lambarada, punctuations iyo html. Kuwa jira sharciyo in la bedeli karaa in file parser ah, oo waxaan ka shaqeyneynaa wanaajiyo qaabka guud. Ka sokow dhibaatooyin aad u soo sheegnay waxaa jira dhibaatooyin la xiriira in la eego sida erayada la macnaha iyo arrimaha jinsiga dual oo ku qoran luqado qaar ka mid ah. Sidaas jawaabtu tahay “weli ka shaqeyneynaa in”.
Waad ku mahadsan tahay ka comments iyo talooyin
May 3, 2012 at 11:16 at the
Ii doona la faylasha iyo “sida loo” oo waxaan ku samayn doono oo aan ku turjumi plugin.
Dhibaatada kale ee: image ah in uusan u muuqan in version Ingiriisi / hal Faransiiska. Hubin karaa on http://www.sahal.fr: SOM “About Alexandre Sahal” / FR “About Alexandre Sahal”
May 3, 2012 at 11:44 at the
First, ku saabsan image maqan. Your theme isticmaalaa wax la yidhaahdo timthumb (kaas oo uun baan garwaaqsan ahaa ammaanka arrin mar uun) iyo sidoo kale gubtay, khayraadka loo baahnayn, Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad isticmaasho tag ah image caadi ah oo wax badan tahay oo kaliya shaqayn doona.
Turjumaad ku saabsan ee plugin, files waxaa hore loo siiyay in waxa aad leedahay, sida ugu fudud u tarjumidda .po ah / .mo xereeyo ilaa aan arko waa in la isticmaalo plugin ah oo lagu magacaabo “codestyling Dhanka” taas oo ah arrin qummaati.
Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin file yar inuu turjumo u interface edit ee JS / lang tusaha.
Dabcan – credit is given to translators 😉
May 16, 2012 at 10:46 at the
Hi waxaan u muuqdaan in ay la dhibaato ka halkii xiiso leh, waxa ay u muuqataa sida luqado badan (Afrikaans, Íslenska oo dheeraad ah) siin dhibaatooyinka iyo ma turjumi waxyaabaha menu, iyo cinwaanka oo dhan, oo beddel qoraalka aan waxba haysan.. sidaa darteed waxa jira blocks kaliya waxba iyaga oo ku.
Originally Waxaan u maleeyay in this waxaa sabab u ahaa cufon, laakiin marka aan kartoo waxaa si meesha looga saaro cufon luqadaha oo dhan iga default marka laga reebo. laakiin ay weli ka dhacaya.
Maxay tani dhici lahaa?
Isticmaalaya furaha ugu google API ka dhalato arrintan?
Waad ku mahadsan tahay wax caawinaad ah
May 20, 2012 at 10:33 at the
Ka dib marka aad saaray cufon afka default aan, inaad ka bariyeelay database turjumaad si toos ah iyo maylka adag ee xisbiga 3aad WordPress utils?
Amir Colnect sheegay
Raadinayaan inay mustaqbalka iyo wararka ka Transposh. Surely it’s going to be a game changing product once complete 🙂
Tani waa plugin aad u fiican…Waxaan m mahadisaan..
Waxaan jeclaan lahaa in aad weydiiso sida i suurto gal ka beddeli karo font qoraalka ee la turjumay oo u muuqata…
Tusaale ahaan…haddii aan Ingiriisi iyo Giriigga…Sidee baan u badali kara font qoyska Giriigga (in Arial ogolaanaysaa odhan – Jidka by default waxa ay kor u yimaado qoyska serif ah).
U mahadsantahay…waayo, wax alla…
Your plugin waa weyn.